ငါတို့ရှိသမျှသည်ထူးဆန်း | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ 26, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
အဖြစ်မကြာမီငါသာကန့်သတ်မိတ္တူများရှိကြောင်းကိုငါသိ၏ ငါတို့ရှိသမျှသည်လိုက်တယ် ရောင်းဖို့ထွက်တော့ကော်ပီတစ်စောင်မှာရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ ဤသည်မှာ Seth Godin ၏နောက်ဆုံးစာအုပ်ဖြစ်ပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပြသခြင်းမဟုတ်ပါ။
အတွင်းဘက်မှကြည့်လျှင် Godin ၏အငြင်းအခုံမှာလူများအားလူအများထံသို့ရောင်းချခြင်းကိုသာကူညီရန်သာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအားတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာသို့ ဦး တည်သွားစေခြင်းသည်မတတ်နိုင်သောကြောင့်မှားသည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်၏အခွင့်အလမ်းသည်ထူးဆန်းသောသူများကိုထောက်ပံ့ရန်၊ လိုက်စားသူများကိုရောင်းရန်နှင့်သင်ဆန္ဒရှိလျှင်၊
Seth Godin ကဘာကိုဖော်ပြသလဲဆိုတာကိုဒီပုံမှာပြထားတယ်။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၊ စျေးသိပ်မကြီးသောဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအားကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ထူးဆန်းစွာဖြစ်စေခဲ့သည် တကယ်တော့ ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သာမန်ဖြစ်ရန်မလိုပါ - ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းမှကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝင်စားမှုများ၊ ဝါသနာများနှင့်အရသာရှိသူများကိုတွေ့နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ခေတ်သစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်သက်ဆိုင်သကဲ့သို့, စာအုပ်၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုငါ့အမြင်အတွက်အရေးပါသည်။ လူများစွာသည်လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုကြသည် အခြားလိုင်းတစ်ခုပဲ။ ငါကအမြဲတမ်းကြားနေရတယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလုံးဝမှားယွင်းနေတယ်။ အဲဒါသာ အခြားလိုင်းတစ်ခုပဲ အချိန်ကိုဖြုန်းတီးချင်တယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုဖြတ်ပြီးတစ်လမ်းရောင်းဖို့ကြိုးစားမယ်။ ပစ်မှတ်ထား ထွက် လူမှုမီဒီယာနှင့်အတူစံပြနည်းဗျူဟာမဟုတ်ပါဘူး။
ကုမ္ပဏီများတွင်အရင်းအမြစ်များနှင့်ထောက်ပံ့ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည် သဘာဝထက်သာလွန်သော စုဆောင်းဝေမျှနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နေရာနှင့်အတူ။ Char-Broil ရဲ့ လူမှုရေးအသိုင်းအဝိုင်းသည်ကင်ရောင်းရန်မဟုတ်ဘဲဘာသာတရားနီးပါးဖြစ်သောအသားကြိုက်သူများကိုစုစည်းရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအသိုင်းအဝိုင်းရှင်သန်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သူတို့သည်အခွင့်အရေးပေးသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုတန်ဖိုးထားလေးစားကြပြီးနောက်ဆုံးတွင်အရောင်းလိုက်နာလိမ့်မည်။
ထူးဆန်းစွာစုစည်းရန်သင်၏ကုမ္ပဏီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည့်နေရာသည်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ အခြားကုမ္ပဏီများသည်လူမှုအသိုင်းအ ၀ န်းတစ်ခု၊ လူမှုရေး၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၊ အခမ်းအနားတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားဘုံရည်မှန်းချက်များကိုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လူမှုရေးဆိုင်ရာစုရုံးမှုများပြုလုပ်ရန်ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အေဂျင်စီသည်ဤဘလော့ဂ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုစီးရီး၊ ရေဒီယိုအစီအစဉ်နှင့်အကြီးမားဆုံးသောဒေသတွင်းနှင့်အမျိုးသားဖြစ်ရပ်များကိုစပွန်ဆာပေးသည် ငါတို့ကဲ့သို့လိုက်တယ်ရှေးရှေး စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်နည်းပညာကိုသုံးချင်တယ်။ ထူးဆန်းတာကကုဒ်၊ APIs၊ analytics နှင့်အခြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းအရာများထက်အလိုအလျောက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Facebook၊ Google+ သို့မဟုတ် Twitter သတင်းများအကြောင်းများစွာမပြောပါ။ ထိုအကြောင်းအရာများမှာ သာမန် ပြီးတော့ဒီအသွားအလာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ဘလော့ဂ်ပေါင်းတစ်ရာလောက်တွေ့နိုင်တယ်။
စာအုပ်ကောင်းလိုက်တာ ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းတဲ့စာအုပ်တွေကိုကြိုက်တယ်၊ ပြီးတော့အဲဒါကိုပိုပြီးကြိုးစားလုပ်ကိုင်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်။ ရှေပြောသလို, ရည်မှန်းချက်မှာလူမျိုးနွယ်စုများကိုရှာဖွေစုဆောင်းရန်နှင့်ဖြည့်ဆည်းရန်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲမိမိတို့၏ထူးဆန်းမှုကိုလက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့အဲဒီလိုဆက်လုပ်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဤစကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုကိုဆက်လက်တိုးမြှင့်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Meetup စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ newsletter (အပေါ်) တွင်စာရင်းသွင်းပါ။ ဒေသဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များအားလုံးကိုထိုတွင်ဖော်ပြထားသော်လည်းသင်သည် Indianapolis မှဖြစ်ရန်မလိုပါ။ မကြာခင် webinars နှင့် virtual event များကိုစတင်တော့မှာပါ။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာပထမဆုံးဖြစ်သည် ဒိုမီနိုစီမံကိန်း တောင်းဆိုမှုများ, ဤစာအုပ်ဝေမျှနှင့်ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်ပါသည်!
26:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 7, 49 မှာ
ဒန်ကနေဒီသည်သူ၏မကြာသေးမီကဗီဒီယိုများတွင်ပြောသောအရာများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်အတွက်များစွာအသံများရသည်။ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များသည်အခြားသူများကဲ့သို့ဖြစ်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးသူတို့၏ထူးခြားသောအရည်အသွေးများကိုအာရုံစိုက်ပြီးသူတို့၏ထူးခြားသောဇာတ်လမ်းနှင့်ရှုထောင့်ကိုမျှဝေခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သည်ဆိုပါကသူတို့၏အမှတ်တံဆိပ်သည်အလိုအလျောက်ရော၊ ဤစာအုပ်နှင့်ဒန်ကဤအချက်ကိုအတည်ပြုပုံရသည်။ ငါရှေ၏စာအုပ်မိတ္တူဖမ်းရန်လိုအပ်ပါတယ်!
26:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 8, 10 မှာ
Scott, ငါထို့နောက်ဒန်ကနေဒီထွက်စစ်ဆေးရပါလိမ့်မယ်! ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့စကားဝိုင်းတွေအကြောင်းကျွန်တော်ပိုကြည့်ချင်ပါတယ်။